Ngaphakathi Inkampani yefanitshala yemozulu yinto epholileyo enokwenza ne-IKEA - Indlela Yokuphila
Ngaphakathi Inkampani yefanitshala yemozulu yinto epholileyo enokwenza ne-IKEA
Ukuba zintathu iimpawu zemillennials ezibeka phambili ngaphezulu kwayo nayiphi na into xa isiza kubathengi, zi: ukwenziwa ngokwezifiso, ukukhawulezisa ukuhanjiswa, kunye nokufikeleleka. Kwimveliso yefenitshala, akukho zininzi iimveliso ezijonga zontathu ezi bhokisi. Kodwa inkampani entsha Ngaphakathi kwimozulu Uthembisa ukuzalisekisa zonke ezo mpawu kunye nomgca wefanitshala-ngelixesha ubeka phambili uyilo lwala maxesha, olwenziweyo. Owu, kunye nesithembiso sayo esikhulu? Yonke ifanitshala yangaphakathi yeMozulu inokuhlanganiswa ngemizuzu eli-10 okanye ngaphantsi.
Ngaphakathi kwimozulu inikezela uluhlu lweemveliso ezisisiseko esifanelekileyo (izihlalo, iitafile, kunye nokugcinwa) kodwa ukubamba kukuba into nganye-ukusuka kuhlobo lomqamelo ngasemva kwesofa yakho ukuya kwisitayile somlenze kwibhodi yakho esecaleni-inokwenziwa ngokwezifiso ngokupheleleyo. Oko kwenza izigidi zokudityaniswa, oko kuthetha ukuba ufumana ifenitshala eyahluke ngokupheleleyo ngendlela oyifunayo. Nazi 400+ iinketho Izinto zokuhombisa kunye nomphezulu onzima ugqibe wedwa (kunye, iisampulu zisimahla!).
Uyilo lincinci kwaye phakathi kwinkulungwane yekhulu kwindalo, kunye nezinto zokhetho lwenkuni kumacandelo aphakanyisiweyo kunye neepateni zejometri ezifumanekayo ezikhoyo kwiitafile nakwiziqwenga zokugcina. Ukwenza ngokwezifiso kuthetha ukuba ifanitshala eyakhiwe ngesiko yenziwe xa iyalelwe-Ngaphakathi kwimozulu ayigcini indawo yokugcina egcwele ifenitshala esele yakhiwe, enceda ukugcina iindleko ziphantsi.
uyilo lwangaphakathi indawo encinci
Ngokungafaniyo nezinye iinkampani zefanitshala zesiko ezinamaxesha akhokelayo kangangeeveki, ngaphakathi kweMozulu ithembisa ukuvelisa nokuthumela iziqwenga zayo ngaphakathi kweentsuku, zonke zivela kwikomkhulu eliseSan Francisco. Iwebhusayithi yabo iyenza icace gca ukuba imveliso kunye nokuhambisa kuya kusebenza njani, kuchaza inani leebhokisi eziza ngendlela yakho kunye nobunzima benye nganye. Kwaye kwakhona, baqinisekisa ukuba indibano ayizukuthatha ngaphezulu kwemizuzu eli-10.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kulutsha kubantu abadala abafakela amakhaya abo lixabiso lempahla enesitayile, efanelekileyo. Ngaphakathi iisofa zemozulu ziqala phantsi kwe- $ 800 kwaye iitafile ezisecaleni ziqala malunga ne- $ 110- ixabiso lexabiso elihle kuye nabani na kuhlahlo-lwabiwo mali. Ikea, sicebisa ukuba ujonge umva wakho.
izisombululo zokugcina igumbi lokuhlambela elincinci
Isibini se-hgtv siqhawula umtshato
Amakhandlela anuka kamnandi ayityhefu
Imidlalo yokubulela abantwana